TRUTH AND PEACE: October 2008
မလေးရေ..စာတွေဖတ်ရမယ်လိုကတော့မျှော်လင့်မိပါတယ်..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ငါရေးတဲ့စာတွေထဲက..နင့်အ တွက်တစ်ခုခုရခဲ့ရင်ပဲဒီစာတွေကိုရေးရတဲ့ငါ့ အဖို့် ပင်ပန်းရတာ ကျေနပ်စရာပေါ့နော နင်မေးလို့သာပြောနေရတာ ငါကဘာမှသိပ်ပြီးမတတ်ဘူးဟ ဒါပေမဲ့ငါသိသလောက်လေးကိုဝေမျှမယ်ပြန်ပြောပြမယ်လေ၊ကြိုက်တာရှိရင်ယူမ
ကြိုက်တာဆိုရင်မှားနေတယ်လို့ထင်ရင်ပြန်ဆွေးပေါ့..နင်တို့လုံးဝလက်ခံရမယ်လို့တော့မပြောဘူးပြောပိုင်ခွင့် လည်းမရှိဘူး လူတစ်ဦးခြင်းရဲ့ လွပ်လပ်ခွင့်ကိုဘယ်သူမှချုပ်ချယ်ခွင့်မရှိဘူးလေ လောကသားတွေရဲ့အနိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်မှလူတစ်ဦးခြင်းရဲ့လွပ်လပ်ခွင့်ကို အသိမှတ်ပြုရတာကို ပိဋကတ်တော်တွေ ထဲမှာဖတ်ဖူးပြီးသာဖြစ်လိမ့်မယ်လေ၊လူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်ကိုညွန်းပြပါလို့ဆိုလာရင်တော့ ငါ့မှာပြစရာကပိဋ ကတ်တော်မြန်မာပြန်တွေကိုပဲညွန်းရလိမ်းမယ်..ငါတို့ကမြန်မာလိုပဲတတ်တာကိုးနော်..ဒီကျမ်းစာတွေဖြစ်လာဖို့က လေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းလောက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာလေ..သြော်တစ်သင်္ချေမှာ သချာင်္သဘောအရတစ်နော်မှာ သုညတစ်ဆယ့်လေးလုံးပါတယ်လို့ဖတ်ဖူးတယ်(၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)ဆိုတာတစ်သင်္ချေလေ..ဘယ်လောက် ကြာတဲ့ကာလလဲတွေးကြည့်ပါနော်…ဒီလိုကာလအကြာကြီးဖြည့်ကျင့်ပြီးမှရလာတဲ့ညဏ်နဲ့ဟောတဲ့ဘုရားစကား တရားတော်တွေက မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာဟာကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးကျမ်းစာပေါ့လေ..ဒါကိုတွေးရင်းနဲ့ ဒီပိဋကတ်တောတွေကိုအာဂုံဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့ရှေးကသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေ၊အခုရှိနေကြတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရဲ့၊
၀ိရိယတော်တွေ၊မဟာညဏ်တော်တွေကို အောက်မေ့ပူဇော်နေမိတယ်လေ..စဉ်းစားကြည့်လေ ငါတို့ကျောင်းစာတစ်အုပ်လောက်များအာဂုံဆောင်ခဲ့ဘူးလား?တစ်ပုဒ်မဟုတ်ဘူးနော်တစ်အုပ် ဝေးသေး.. ခုဖတ် ခုမေ့..လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောခဲ့တယ်လေ“အာဂုံရမှအာဂလူ”တဲ့မေလေးရေ..ငါတော့်ဘာမှအာဂုံမရဘူးဟ၊
အခုခေတ်မှာပိဋကတ်တော်တွေကိုCDနဲ့သိမ်းcomputerနဲ့ထိမ်းထားကြပေမဲ့ရှေးခေတ်ကအရှင်ကောင်းအ ရှင်မြတ်တွေက“နှလုံးသားနဲ့ထိမ်းသာလာခဲ့ကြတာလေ”ဒီဆရာတော်ကြီးတွေ၊လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ် နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတရားကို..ငါတိုံ့ဘာနဲ့ပြန်ဆပ်ရမလဲ?တွေးကြည့်လေ ဒီနေရာမှာမေလေးသိဖို့ပိဋကတ်တော်တွေအ ကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်
ပိဋကတ်သုံပုံဆိုတာက၀ိနည်းပိဋကတ်၊သုတ္တံပိဋကတ်နဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကတ် သုံးခုပေါ့နော်ဒီသုံးခုမှာမြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူတဲ့ပါဠိတော်ကျမ်းရင်းက-၅၂ကျမ်း၊ဒါပေမဲ့ အခုရှိနေတဲ့ ဆဌသံဂါမူအရရိုက်နှိပ်ပူဇော်ထာတာက ကျမ်းစာအုပ်ပေါင်းလေးဆယ်(၄၀)ရှိတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချို့ကျမ်းတွေကိုတစ်ပေါင်းတည်းစုလိုက်လို့ပဲ မေလေးနားလည်အောင်စာအုပ်တွေရေပြမယ်နော်..
ဒီတော့စုစုပေါင်းဆိုရင် ကျမ်းက -၅၂ကျမ်း စာအုပ်က(၄၀)ပေါ့နော်..အော် မေ့လို့ ခုဒ္ဒကနိကာယ်မှာပါတဲ့ ကျမ်းသုံးဆယ် က
စုစုပေါင်းဆိုင် ကျမ်းပေါင်း(၃၀) စာအုပ်က(၂၈)အုပ်
ဒီလောက်များတဲ့ကျမ်းစာတွေကို အာဂုံဆောင်လာတဲ့မဟာလူသားပါရမီရှင်တွေကို ငါ့နှလုံးသားထဲကအကျင့်တ ရားနဲ့ပဲငါပူဇော်နေမိတယ်..မေလေးရယ်ဒီပိဋကတ်တွေရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေကို..ငါတို့တကယ်ကျင့်ဖို့တော့လို တယ် လေ ပြီးတော့ သေသေချာချာ ရင်ထဲရှင်းအောင်သိဖို့လည်းလိုတယ်။။ဒီအယူဆတွေဟာ လူတွေအပါအ၀င် သတ္တ၀ါအနန္တအတွက် ဘ၀နေနည်းလမ်းညွန် နောက်ပြီးတော့သေနည်းလမ်းညွန်လေ။
မေလေး..ဒီအယူတွေဟာဘယ်သူအပေါ်ကိုမှ မျက်နှာလိုက်မှုမရှိတဲ့ ဘက်လိုက်မှုအကင်းဆုံးအယူဝါဒ၊နောက် ပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ဘ၀လမ်းစဉ်တွေဆိုတာကို ပိဋကတ်တော်တွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်ပိုသိပါလိမ့်မယ်လို့ ငါမျှော်လင်နေရင်းပေါ့။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 27.10.086ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 24.10.080ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 22.10.08 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ကြယ်တွေကလည်းစုံလို့..ဒီတုံးကနင်ကကျောင်းပြီးစ အချိန်လေး နင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို
မှာဘာဖြစ်ခြင်လည်းတဲ့?” သူဌေးလား?ဘုန်းကြီးလားနေကစ်ာရေးဆရာလား ?တဲ့ တော်တော်လေး
ငါဖြစ်ချင်တာက လူပီသတဲ့လူပဲဖြစ်ချင်တာပါ..ဟုတ်တယ်လူပီသတဲ့လူဖြစ်ဖို့ကတော့ မလွယ်ဘူးလေ
လူငရဲသားဆိုတာလူသားစင်စစ်ဖြစ်ရက်နဲ့၊သူ့အသက်သတ်၊သူ့ဥစ္စာခိုးစတဲ့ မပြုလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်တွေကို
လုပ်လို့ အပြစ်ဒဏ်ပေးခံနေရတဲ့လူတွေ..ဥပမာ ရာဇ၀တ်ပြစ်ဒဏ်သင့်လို့ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရတာ၊ခြေလက်
လူနဲ့လူချင်းအတူတူဖြစ်ပေမဲ့ သူများခိုင်းတာလုပ်၊သင့်မသင့်မစဉ်းစား သူများကသတ်ဆိုသတ်၊ခြေဆိုခြေ
မိမိအကျိုး..သူတစ်ပါးအကျိုးကိုကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုသိပြီး မကောင်းမှုကိုလုပ်ရမှာကို ရှက်တဲ့၊ကြောက်တဲ့လူ
မှတ်ချက်။ ။ ကျနော်သကြီးကိုရေးမတတ်တာကြောင့် ပြင်ဖတ်ပေးကြပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 18.10.080ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စည်းနေတဲ့ပုံစံတစ်ခု ဒါမှမဟုတ်သဏ္ဍန်တစ်ခုပဲလေ…ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကတော့၊ငါတို့
မေလေးသိပြီးတဲ့ အတိုင်းပဲ“စေတနာသည်ကံ” တဲ့ဒါပေမဲ့စေတနာထားရုံနဲ့တော့ကံအကျိုးပေးဖြစ်လာမလား?
ဟာ..သူဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်း ကာယကံ၊၀စီကံ၊မနောကံတွေ၊တစ်ထပ်တည်းကျပြီဆိုရင်တော့ တကယ်အောင်မြင်
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 12.10.08 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ဂရုစိုက်မိနေတတ်တယ၊သတိထားမိတာလေးတွေပြောတာပါ၊ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းဒီလမ်းကို တစ်နေ့လျှောက်ရမှာ မေ့နေကြတယ်တူပါတယ်…အလားတူပဆရာတပည့်တွေကြားမှာပိုက်ဆံပိုပေးနိုင်သူတွေနေရာပိုရတယ်၊လိုတရ
တပည့်တွေကိုပိုချစ်နေတယ်၊တကယ်တော့ဆရာဆိုတာသီလသိက္ခာကို ပိုပြီးစောင့်ရတာ၊ကိုယ်တိုင်ကစံပြဖြစ်ရမှာလေ၊အတတ်လည်းသင်၊ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊သိပ မချန် ဘေးရန်ကာဆီး
လက်တွေ့အသုံမချခြင်တာလား?မချတတ်တာလား?ခေတ်မမှီတော့ဘူးထင်လို့လား? ကျနော်တို့ရှေ့တန်းကို ပြန်ရောက်ဖို့ကတရားတော်ကို လေးစားစွာပြန်လည်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာကို ယုံကြည်ဆုပ်ကိုင်နေရင်းနဲ့လေ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 7.10.080ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊